Imifanekiso yevidiyo yombhoxo uBrenton Tarrant (ukusasaza okubukhoma) I-Christchurch eNew Zealand: UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	16 Matshi 2019	• 14 Comments
Umboniso wevidiyo oshicilelwe yiBrenton Tarrant wawuza kuwenza umjelo ophilayo ngexesha lokuhlaselwa kwimikhosi e-Christchurch eNew Zealand, iyaphawuleka kakhulu (jonga ividiyo ezantsi). Ndifuna ukuwabonisa apha ukuze ukwazi ukwenza uluvo lwakho malunga nobuqiniso bokuhlaselwa. Yam nqaku yangaphambili Ndandibonisa ukuba yeyiphi indlela ekhoyo ukubeka izinto ezinjalo kwisigaba. Ividiyo ehambelanayo ibonisa ukuba akukho ndawo ingafunyanwa. Umqhubi unakho ukuhamba kwindawo yokupaka ehlambulukileyo ngaphandle kokuba umntu uphendule. Kukho nakubonakala kungekho naluphi na umemeza kwi-mosque, ngelixa ulindele ukuba abantu babaleke ngenxa yokoyika.
Ngokuqinisekileyo siya kudlala ngokusebenzisa imifanekiso kunye neendaba zeentsapho ezihlala kwiimidiya, kodwa ukuba uyayazi iindlela zokwenza iifayile ezinzulu, kunye namavidiyo amanga kunye nezithombe ezibandakanya intanethi yoluntu, ngoko sinokulinda. kwikholo elingakhethiyo neliyimfama kwimifanekiso ebonisiweyo. Ngeendlela zamanje zobugcisa, ngendlela yesofthiwe kunye neenkqubo ezihlakaniphile (AI), kulula kakhulu ukudala abantu abangekhoyo kunye nefakelo nayiphi na into efunwayo. Unokwenza unxibelelwano olubukhali kunye nomntu apho ubuso obungabikho (inkohliso enzulu) ubuso bungasetyenziselwa ukugubungela ngexesha langempela kwaye akukho mntu uya kubona ukuba kuyinyumba. (jonga ividiyo ezantsi kwaye uqhubeke ufunda apha ngezantsi)
Ngoko asiyazi ukuba iBrenton Tarrant ikhona ngokwenene. Udala ubuso obunzulu benkohliso, umzekelo le software yeNVDIA, ngoko unako ukuyifaka ividiyo ngokubanzi ngendlela enjalo yobuntwana. Into efunekayo kuphela ukuhlanganiswa kwesofthiwe kunye ubu buchule besikrini. Ngokuqinisekileyo siya kubona imifanekiso yezogwetho kwaye ngokuqinisekileyo siya kubona imifanekiso yefowuni okanye yokhuseleko yekhamera, kodwa asinakucinga ukuba nayiphi na ividiyo okanye ukurekhodwa komsindo kunokuhlolwe ukuthembeka. Leyo yinto yokuthembela kwaye oko, urhulumente ngokwemvelo ufuna ukuba sizithembele 'iindaba zokungabonakali' zeenkcukacha eziye zinikezela, kodwa ke kufuneka uthembele umgcini wenyama ohlola inyama yakhe. Umculi ohlola inyama yakhe ngokuqhelekileyo uya kuvunywa kwaye kwaye, kubanzi, kubonakala kubaluleke kakhulu ekuthembekeni. (jonga ividiyo ezantsi kwaye uqhubeke ufunda apha ngezantsi)
Iingxelo ezifanelekileyo ezivela kumfundi apha kwisayithi zilandelayo:
Uphi inkwenkwe yokuzalwa ye-28 inokufumana imali yokuqala kwiYurophu kwaye ihambele amazwe ahlukeneyo apho ukuze unike uluvo lwakhe kunye nenzondo. Ngaba ke le ndoda ingakwazi ukufumana ubomi kwiinyanga ezimbalwa eDunedin, ibe ilungu lebhula lokudubula ize iqeshe iimoto ukwenza isenzo sakhe? Umntu onjalo unokufumana njani ikhadi lekhredithi.
Nangona kunjalo, into endimangalisa ngayo kukuba lixesha eliphakathi kokubhunqa okubini. Ndivile imizuzu ye-11 kunye nemizuzu ye-7. Umgama unjalo kwi-6 km, kodwa ukuba kufuneka ungene kwimoto ukusuka kwi-mosque yokuqala uze uhambe le ndlela (ukupaka imoto ukuya kwi-mosque elandelayo) ngaba lixesha elaneleyo?
Ngenxa yokuba ndihlala apha ngokwam, ndifuna ukuthatha indlela namhlanje. Ngelishwa, ezininzi iindlela eziseMosque zokuqala ukudubula zavalwa ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, ndifuna ukuzama kwakhona kwiveki ukuba ndibone ukuba ngaba i-6 km ingafunyanwa kumzuzu we-7 (ngoLwesihlanu ntambama).
Cinga kwakhona malunga nawe. Imozulu iya kuba yesazi Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo unokudlala umdlalo? Kwimeko nayiphi na into, ukudubula kugalela ekuvuseleleni amaqela emiphakathi. Senene waseAustralia Fraser Anning kuthiwa ukufuduka kwamaSulumane kungekudala emva kokudubula. Kwaye ngoko kubonakala sengathi izibonda kunye kunye nokugqithisa zikhutshwe zingakwazi ukuvuselela ukuchasana, ukwenzela ukuba okwangoku ufuna ukufunyanwa (khangela yam nqaku yangaphambili). Le yi-hegelian dialectics, apho i-thesis kunye ne-anti-thsis ikhokelela ekuqaliseni. Ngoko udinga ukudibanisa kunye ne-minus pole ukuvelisa i-current ukusuka kwibhetri. Ngale ndlela, ukuphikisana kuluntu kuyakhuthazwa ngokugqithiseleyo ukuba ibe kunye kunye nokunciphisa izibonda. Oku kuya kwenziwa ngokusebenza kwengqondo (PsyOps). Zigwebe.
Ukuba le vidiyo ingezantsi isusiwe, nqakraza kwesi sixhobo.
Uludwe lwekhonkco lovimba: theguardian.com
Kuyinto ebulula ukuba umntwana uqikelele ikusasa ukuba ubona kwi-script: ube nguNostradamus
tags: imifanekiso, Brenton, Christchurch New, eziziimbalasane, video, Fraser Anning, phila, mosque, Ukudubula, i-smokee, stream, I-Tarrant, yokuzonwabisa, Zeeland
16 Matshi 2019 kwi-20: 22
Andizange ndibone ngokukhawuleza ukuba xa ndibona imifanekiso yokuqala, kodwa ndijonga emva kwexesha elinye, ndafumana ukuziphatha okungaqhelekanga kubantu. Into endiyifumene ngayo kukuba emva kokutshulwa kokuqala, amaqela abantu ahlala ehleli kunye nendawo emasikeni. Ewe, inokuba ngumfutho. Kodwa yena wanika wonke umntu intshumo yokushisa ekupheleni. Kwiimifanekiso zeendaba kukho ngokukhawuleza kuninzi lwabasindileyo kwaye akukho ndawo ikwazi ukubona izimbobo zebhola. Unokungena kwimifanekiso emibi. Kodwa kuyamangalisa kwaye ngokuqinisekileyo iyafana neflegi yamanga!
17 Matshi 2019 kwi-10: 33
Ukunyanzeliswa komsebenzi kuyamangalisa.
Ndayifaka le (ividiyo esusiweyo) kwiVimeo.com Ngemizuzwana embalwa iphela akhawunti yam isusiwe.
17 Matshi 2019 kwi-16: 09
17 Matshi 2019 kwi-21: 22
Ngokuqinisekileyo, ndiyazicima ngokusuka kwi-QAnon intro kwividiyo exubileyo, kuba, ngombono wam, i-QAnon iphinde ilawulwe i-psyop, eya kuthi idibaniswe nokuwa kweTrump kunye nedola.
16 Matshi 2019 kwi-21: 15
U-Eva Gabeler uthetha kwisitya esizaliswe ngokupheleleyo kunye neentyantyambo zaseDatshi kwimvelaphi yokuba njengento intombazana enxulumene nayo kufuneka ixelele intatheli yeTelegraaf ithetha ngokunyaniseka nangento engafanelekanga, uluphi uhlobo lwemifanekiso uEva abonayo? Ucinga .. ukuba asizange sibone. U-Eva ubonakala ungumdlali omhle kakhulu, kunye negrain yakhe engabonakali kakuhle ukuba uyavuya.
Uluhlu lwe-paintball ntambama kwiklabhu yepalball ibheka ngakumbi. Awuqondi ngoba zonke iimeko zikhoyo
zonke izinto zendalo kwaye zingabonwa.
Kwaye ngokuqinisekileyo unayo inkundla yecala abadlali,
16 Matshi 2019 kwi-23: 33
Ngaba uyazi (mhlawumbi) akenziwanga nangona kunjalo (angatsho ngoko kubonakala ngokucacileyo ukuba ayengokoqobo). Inani labantu kwividiyo alilungile ngamanani achazwe, ngendlela, kufuneka kubekho i-100. Ukongezelela, mhlawumbi vumela izixhobo zengcali zithethe malunga nezixhobo eziqhelekileyo zenza ntoni.
Kwaye mhlawumbi i-New Zealand, kuba yenye yamazwe okugqibela apho ulindele into enjalo. Kuphela iinyanga ezimbalwa. Ukuba kwenzeka apho, kunokuthi kwenzeke naphi na.
16 Matshi 2019 kwi-23: 48
Izolo nanamhlanje ndazama ukufikelela kwimikhosi. Nangona kunjalo, iindlela zokufikelela ezivela kwimizila eyahlukeneyo zivaliwe ngenxa yemisebenzi yendlela (bekuyiyo ntlambo yamahhala sele isenjalo ??). Kufuneka uzame kwakhona kwiiveki ezimbalwa.
17 Matshi 2019 kwi-02: 12
Yibambe le mzuzwana:
I-Herald ibikela ukuba umpulazi usasaza uhlala kwindawo yokudubula imizuzu ye-17.
I-Stuff ithi uCarl Pomare umphathi we-Naki Labor Hire wayengomnye wabantu bokuqala kwindawo. Wayeqhuba nge-Mosque malunga ne-1.40pm waza wabona abantu abaninzi beqhuba. Wava ukutshulwa kwelokuhamba ngomlilo kwaye abantu bebetha umhlaba.
IHerald ibika umdlali wesibhamu osibini osibonile kufuphi ne-Linwood Masjid Mosque. I-Newshub ye-TV3 ithi amangqina abikile ekuboneni umpulazi egijima emkhosini apho.
Ngoko malunga ne-1.40 isiqalo senziwa kwi-mosque yokuqala apho kuhamba khona imizuzu ye-17. Ngoko i-shooter yayiza kuqhutyelwa kwi-mosque yesibini ngaphambi kweeyure ze-2. Liliphi ixesha elichazwe kwi-shot seconds?
17 Matshi 2019 kwi-02: 36
Amapolisa athi kwakukho ukudubula kwesibini kwiMosque yaseMinwood Masjid.
UMark Nichols utshele i-New Zealand Herald ukuba weva malunga nezixhobo zokuhlaselwa ezihlanu kunye neloLwesihlanu umthandazo-goer wabuyela ngomlilo ngesibhamu okanye isibhamu.
UMnu Nichols uthe wabona abantu ababini belimele beza kulungiswa ivenkile yakhe yemoto kwaye bobabini babonakala bephila.
kwakhona ubungqina kwi-mosque yesibili.
"Sasiye emininzi yemizuzu yethu ye-10 kwaye sakuva izibhamu ngaphandle, kodwa saqhubeka sithandaza. Umzuzu olandelayo, wawuphakathi. Wayengumntu okhanyisa isikhumba kwaye waqala ukudubula kwaye sonke sahamba sihamba.
ngoko xa ividiyo yokuqala yokudubula ivelise izinto ze-17 imizuzu kwaye iqalile i-1.40-1.45 (ibhaliwe imizuzu ye-15 ngaphambi kokuqala komthandazo) kunye neyesibili imizuzu ye-10 emva kokukhutshwa komthandazo ngoko umqhubi kufuneka abe nemizuzu ye-Sun 10 ukufumana ukusuka kwi-A ukuya kwi-B.
Kwakungaqhelekanga ukuba kungaphantsi kwesigama seyure akukho nyathelo ezaneleyo ezithathiweyo malunga neminye imikhosi (iinjongo ezinokwenzeka)
17 Matshi 2019 kwi-10: 51
tedsdam wabhala wathi:
17 Matshi 2019 kwi-12: 52
17 Matshi 2019 kwi-13: 43
Yingakho i-akhawunti ye-vimeo endiyivale iminyaka kwiminitha embalwa ... ngaphandle kwamavidiyo.
Ukunyanzelisa! Geroge Orwell ...
17 Matshi 2019 kwi-17: 07
UGeorge Orwell = abantu abasesikweni abasolwayo
1 Aprili 2019 kwi-20: 11
Umzuzwana wokufikelela kwiinkcukacha unqatshelwe, unokuqiniseka ukuba uyingoma.
Akukho mntu uye wakhuselwa ngokubamba inyaniso. Lo urhulumente okhohlakeleyo usebenza.
« I-49 yabulawa ekuhlaselweni kwee-mosque ezimbini e-Christchurch eNew Zealand
Ngaba i-Brenton Harrison Tarrant ihlasela ukuqaliswa kwesigebengu se-anti-Turkey? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 11.675.768
Ikhamera 2 op IAmazon iyatsha, imiphunga yomhlaba isemlilweni!
Hare op Kutheni le nto i-transgender iba yinto eqhelekileyo kule nkulungwane ye-21 kwaye inyani inyamalala
UMartin Vrijland op IAmazon iyatsha, imiphunga yomhlaba isemlilweni!
Joyina amanye ama-1.615 ababhalisile